बिना अन्तरघात हारेका छैनन् यी नेता, कसले गर्यो अन्तरघात ? – Famous Nepal
10:03: PM Thursday October 18, 2018
बिना अन्तरघात हारेका छैनन् यी नेता, कसले गर्यो अन्तरघात ?
Posted on December 11, 2017 at December 11, 2017 by फ्यामोस नेपाल
०४८ सालयता हरेक निर्वाचनमा पौडेल फराकिलो जित हात पार्दै आएका थिए । तर, एमाले उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठसँग ६ हजार ८०२ मतान्तरले पराजित भए । पौडेलले २७ हजार ६९० र श्रेष्ठले ३४ हजार ४९२ मत पाए । ‘कांग्रेसले हारजितको पर्वाह नगरी लोकतन्त्रलाई अघि बढाएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सधैँ अग्रसर रहन्छ । मेरो जीवन सदैव देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति समर्पित रहन्छ । देश र जनताका सेवामा क्रियाशील रहनेछ,’ पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।-
कास्की । कास्कीको तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रको समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिदाँ प्रतिनिधि सभा समानुपातिकमा लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीले जिल्लाभर १ भोट…
Posted by फ्यामोस नेपाल - December 18, 2017 0
काठमाडौं : गत १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षमा नराम्रोसँग पराजय भोगेको कांग्रेसले समानुपातिकमा भने सकारात्मक…
प्रकाशलाई श्रद्धाञ्जली दिन देउवा र ओली लाजिम्पाट पुगे
काठमाडौँ ।हृदयघातबाट आईतबार निधन भएका प्रकाश दाहाललाई श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लाजिम्पाट…
भागबन्डा नमिल्दा सरकार विस्तारमा सकस
दाङ – नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश ५ को सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ…